Chhaharaa | प्रचण्डले कांग्रेसलाई ठेगान लगाउने!
काठमाडौं । छसस । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत बुधबार नेपाली कांग्रेसलाई कडा धम्की दिएका छन् । उनले ‘एमालेलाई जस्तै कांग्रेसलाई पनि ठेगान लगाउने दिन नआओस्’ भन्दै दिएको धम्की माओवादी केन्द्रका तर्फबाट देशभरका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कुमारी हलको प्रशिक्षणका क्रममा दिएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कसरी काम गर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधिका रुपमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएकाहरु अरुभन्दा फरक कसरी देखिने, अनि माओवादी केन्द्रको गुमेको शाख कसरी फर्काउने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिने प्रमुख प्रशिक्षक अध्यक्ष प्रचण्ड थिए । त्यहाँ प्रचण्डले पार्टीबाट नवनिर्वाचित देशभरका मेयर– उपमेयर, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य जनप्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए ।
सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसमा घमण्ड, दम्भ र अहंकार बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कांग्रेस नेताहरुलाई चेतावनी दिएका थिए ।
प्रचण्डले भने– ‘एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै कांग्रेसलाई ठेगान लाउने दिन नआओस् । म कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु धेरै दम्भ तपाईंहरूमा नआओस् ।’
प्रचण्डले सम्बोधनको क्रममा स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा कांग्रेस नेताहरुले दम्भ देखाएको संकेत गरेका थिए । किनभने कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा इतर समूहका नेताहरुले मात्र गठबन्धनका विपक्षमा मत राख्दै आएका छन् । गठबन्धनभित्र यसबारे कुनै विमति देखिएको छैन । तर, प्रचण्डले धेरै ठाउँ जितेपछि कांग्रेसमा दम्भ आउन सक्ने कुरालाई दम्भ देखाइसकेको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा छोरी रेनु दाहाललाई जिताएपछि प्रचण्डको स्वर ठुलो भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि कांग्रेससँग तालमेल गरेर फाइदा लिएपछि संसदीय र प्रदेश निर्वाचनमा कांग्रेसलाई लात हानेर प्रचण्ड एमालेसँग मिल्न गएका थिए । प्रचण्ड अहिले एमालेसँग मिल्न सक्ने अवस्थामा
छैनन् । तर संघीय संसद र प्रदेश संसदको निर्वाचनमा कांग्रेसले गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रलाई ४० प्रतिशत सिट दिवस भन्ने चाहेका छन् । यो धम्की त्यही पाउने दबाब स्वरूप आएको हो । अर्काेतिर चुनाव घोषणा अगाडि सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्छ र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावमा जानू पर्छ भन्ने माओवादी केन्द्रको अव्यक्त इच्छा देखिन्छ माओवादी केन्द्र स्रोतले भन्यो ।
माओवादी केन्द्रको जनप्रतिनिधि प्रशिक्षणमा प्रचण्डले भनेका थिए– ‘कांग्रेसले धेरै ठाउँ जित्छ भन्ने त हामीलाई थाहै थियो । तर, त्यसबाटै दम्भ देखाए फेरि एमालेकै अवस्था आउन सक्छ । नारायणकाजीसहितको गठबन्धनको बैठकमा पनि ‘यस्तै अवस्थामा हो भने’ भन्ने कुरा भएकै छ ।’
प्रचण्डले यति धम्की दिइसकेपछि आफू र आफ्नो पार्टी अझै पनि गठबन्धनकै पक्षमा रहेको दोहो¥याएका थिए । त्यसो भन्दै गर्दा उनले पहिले केपी शर्मा ओलीको दम्भले नेकपा समाप्त भएको र एमाले पनि कमजोर बनेको भन्दै बढी जितेपछि कांग्रेस पनि त्यही बाटोमा जाने कुराको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
‘ओलीका दम्भले एमाले कमजोर हुँदैछ । माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा दुइतिहाइको सरकार बनाएपछि माओवादी केन्द्रलाई सिध्याइहालिन्छ भन्ने अहंकारले एमाले यो अवस्थामा पुगेको हो, अहिले कांग्रेसको पनि त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ । हामीले मेहनत गरेरै प्रधानमन्त्री बनायौँ । हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइरहनुहोस् भन्ने छ, अरु केही छैन । हामी गठबन्धन अघि लैजान
चाहन्छौँ ।’ उनले कांग्रेस पनि एमाले जस्तै माओवादी केन्द्र केही होइन भन्ने तहमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता जाहेर गरेका थिए ।
यसरी कांग्रेसप्रति प्रचण्डको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न कोणबाट टिप्पणी सुरू भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् सत्ता गठबन्धनमा तिक्तता आएको बुझाइ एक पक्षको रहेको छ । अर्को पक्ष भने आउँदो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सिट बार्गेनिङको रूपमा प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अर्थ्याउँदै छन।
माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टी गठबन्धनको पक्षमा उभिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा टिप्पणी गर्न आवश्यक नभएको बताएका छन । ‘अध्यक्षले बोलिसकेपछि थप टिप्पणी गर्न जरुरी छैन । उहाँले गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरि प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन, अध्यक्षज्यूले पार्टी गठबन्धनकै पक्षमा छ भन्नु भएको छ ।’
प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा कांग्रेस दोस्रो तहका नेतृत्व तथा कार्यकर्ताहरूले प्रचण्डलाई जवाफ दिने र आलोचना तथा टिप्पणी गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु भने प्रचण्डको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिलाई उनले आफ्ना कार्यकर्तामाझ क्रान्तिकारी देखाउन गरेको प्रयासका रुपमा अर्थ्याउँदैछन् । सत्ता गठबन्धन संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल शब्दको दुरुपयोग गर्नु कम्युनिस्टहरुको चरित्र भएको टिप्पणी गरेका छन। उनले भने– ‘शब्दको दुरुपयोग गर्ने कम्युनिस्टहरुको चरित्र नै हो । बोल्नका लागि बोलिदिएको मात्र हो । बेला बेला प्रचण्डको यस्तो बोली आइरहन्छ, प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएर आफ्ना मान्छेहरुलाई ढाडस् दिएको हो । कार्यकर्ताको अगाडि अलि ठूलो देखाउन भनेका हुन् । यसको तुक छैन ।’
कांग्रेस नेताहरुले प्रचण्डको भनाईलाई सामान्य रुपमा लिए पनि निकट विगत हेरियो भने उनका बोलीको अर्थ सामान्य नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन पनि कांग्रेससँग महानगरमा तालमेल गरेका प्रचण्डले कांग्रेसकै सहयोगमा भरतपुर महानगरपालिकामा आफ्नी छोरी रेनु दाहालसहित देशभर १०६ स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधि जिताउन सफल भएका
थिए । तर, स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावलगत्तै प्रचण्डले वाम गठबन्धनको नाम दिएर एमालेसँगै चुनावी गठबन्धन घोषणा गरेका थिए । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा त्यही गठबन्धनका नाममा कांग्रेसको सहयोगमा जिताएका जनप्रतिनिधिलाई पनि कांग्रेसविरुद्ध प्रयोग गरेका थिए । माओवादी केन्द्र –एमाले गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याउँदा कांग्रेस संसदमा २५ प्रतिशत भन्दा कम सिटमा खुम्चिएको थियो ।
अहिले पनि समय सन्दर्भ उस्तै उस्तै नै रहेको कांग्रेसका नेताको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्रले विगतमा भन्दा १५ स्थानीय तह बढी जितेर आफूलाई थप बलियो महसुस गरिरहेको छ । पाँचवर्ष अघिजस्तै कांग्रेस माओवादी केन्द्र गठबन्धनकै सरकार विद्यमान छ । उनै कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा छन् ।
त्यसो त उनै प्रचण्ड यो गठबन्धन प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म अघि बढ्ने दाबी गरिरहेका छन् । सोही गठबन्धनमा पनि अलि बढी स्थानमा सिट बाँडफाँडका लागि उनले यो कदम चालेर राजनीतिमा ‘च्याखे’ थाप्ने काम गरेको बुझाइ कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको रहेको छ ।
‘राजनीतिक दाउपेचको कुरा मात्रै गर्ने जुन प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा मौलाएको छ त्यसैको यो सानो उदाहरण हो प्रचण्डको अभिव्यक्ति । राज्यव्यवस्थालाई दह्रो बनाउने र सुशासनमा जोड दिने बेलामा पख्लास् देखाइदिन्छु भन्नु विडम्वना हो। यतिबेला आसन्न चुनावमा के हुन्छ भनेर कलम लिएर हिसाबकिताब गर्ने बेला हैन ।’
कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत प्रचण्डले गठबन्धन बैठकमा कुनै असन्तुष्टि नराखेको भन्दै पार्टी कार्यकर्तालाई खुसी पार्न उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने बताएका छन । उनले भने– ‘गठबन्धनको बैठकमा यसलाई अगाडिसम्म लानुपर्छ भन्नेमा उहाँकै जोडबल छ, गठबन्धनको बैठकमा यो लेवलमा प्रतिकृया छैन । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई उत्साहित गर्न भन्नुभएको होला । बेला बेला यस्तो भइरहन्छ । हामीले त गठबन्धनको बैठकमा उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ,के भनिरहनुभएको छ त्यसलाई आधार मान्ने हो ।’ प्रवक्ता डा. महतले पार्टीका आन्तरिक मिटिङमा बोलेको कुरालाई लिएर धारणा बनाउनु हतारो हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले कांग्रेसलाई पहिलो र माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो दल बनाएको छ । गठबन्धन गरेर पनि दोस्रो दल बन्न नसकेको माओवादी केन्द्रले १२१ पालिका मात्र जित्न सफल भएको छ । पाँच वर्षको समय अवधि र गठबन्धनको आडमा सिट संख्यामा उल्लेख्य बढाउन नसक्दा पनि माओवादीकेन्द्र सन्तुष्ट बन्ने अवस्था छैन ।
कांग्रेसका केही नेताहरू भने स्थानीय तह निर्वाचनमा मापदण्ड र आचारसंहिता नबनाई गठबन्धन गर्दाको परिणाम अहिले प्रचण्डको अभिव्यक्तिले छर्लङ्ग पारेको बताएका छन् । हचुवाको भरमा गठबन्धन गर्दाको प्रचण्डले आफूलाई ‘ओभर रेटिङ’ गरेको कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीको टिप्पणी गरेका छन । उनले भने– ‘ठेगानै लाउने कुरा गर्ने हो भने राणाले पनि कांग्रेसलाई ठेगान लाउन खोजेकै हो, निरंकुश राजाले पनि कम्युनिष्टलाई उचालेर कांग्रेसलाई ठेगान लगाउन खोजेकै हो, माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर पनि कांग्रेस ठेगान लाउन खोजेकै हो । हेर्नुहोस् उनीहरुको हालत कस्तो छ ?, इतिहास हेरौं जसले कांग्रेसलाई ठेगान लाउन खोज्यो उनीहरुनै ठेगान लागेका छन् । अझै हेरौं ठेगान लाउँछु भन्नेहरुको पर–पर रुप कस्तो देखिन्छ ?’ केसीले कसैले ठेगान लाउँछु भन्दैमा कांग्रेस आफ्नो आर्दशबाट झुकेर काम नगर्ने दावी गरेका छन । प्रचण्डको भनाइलाई कांग्रेसले खासै मतलव गरेको छैन,तर प्रधानमन्त्री देउवा भने प्रचण्ड अस्थिर छन,एमालेसँग मिल्न जाने पो हो कि? भनेर त्रसित छन् ।